For 23 years, the University has been producing proficient graduates from her peaceful bosom while upgrading herself with the unanimous efforts of administrative and academic staff hand in hand under the leadership of successive devoted rectors. I take great pride in serving this University as the present rector.
Vision and Mission of UOPY
လူတိုင်းသက်တမ်းစေ့ အသက်ရှည်စွာ နေနိုင်ရေးနှင့် လူတိုင်းရောဂါဘယ ကင်းရှင်းရေး ဟူသော ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက် (၂) ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နှလုံးရည်ပြည့်၀ပြီး ဆေးဝါးသိပ္ပံပညာ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သော ဆေးဝါးသိပ္ပံပညာရှင် များကို သင်ကြားလေ့ကျင့်မွေးထုတ်ရန်။
နိုင်ငံတကာစံချိန်မီ ဆေးဝါးသိပ္ပံပညာရပ်များကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်သည့် အရည်အသွေးပြည့်၀သော
နိုင်ငံသားများအပေါ် လူသားချင်း စာနာညှာတာ ထောက်ထားသော
နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအပေါ် ချစ်မြတ်နိုးသည့် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှိသော
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းစဉ်လာများကို လိုက်နာထိန်းသိမ်းသော
စဉ်ဆက်မပြတ် ပညာရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော
အများပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော
ဆေးဝါးသိပ္ပံပညာရှင်များကို သင်ကြားရေး၊ ဆေးဝါးစက်ရုံ၊ ဆေးရုံများ၊ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ သုတေသနနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍများတွင် တိုင်းပြည်၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ သင်ကြားလေ့ကျင့် မွေးထုတ် ပေးပါမည်။